Raysal Wasaaraha Dalka Ingiriiska Oo Ka Cadhootay Hadalkii Donald Trump Ee Weerarkii London | Somaliland Today
← Enough Is Enough Of Kulmiye Government. Wadankii Dhammaa Wax Yar Siisataye Waayahay.
Boqolaal Soomaali Ah Oo Laga Soo Badbaadiyay Qowmiyadda Oromada. →
Raysal Wasaaraha Dalka Ingiriiska Oo Ka Cadhootay Hadalkii Donald Trump Ee Weerarkii London
(SLT-London)-Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sidii caadada u ahayd Tweet uga faalloodey qaraxii ka dhacay tareenka ee gudaha magaalada London, waxaana uu ku tilmaamey in uu ka danbeeyey mid argagixiso ah oo nolosha ka dhacay, Trump ayaa ka hordhacay baaritaanka oo kuma ekaan keliya in uu canbaareeyo ee waxa uu sii sheegay sida Boolisku u garanayaan qofkaas.
Raysalwasaaraha Britain Theresa May ayaa ka guuxdey hadalkaas oo dhisatey mar ay saxaafadda la hadleysey, waxaana ay Trump kuc anaanatey in uu faraha la galo baaritaan socda.
– Anigu u malayn maayo in ay waxtar leedahay mala awaal la sameeyo iyada oo baaritaan socdo, ayey tiri Theresa May.
Theresa May Raysalwasaaraha Britain ayaa qaraxii yaraa ee ka dhacay tareenka gudihiisa kaas oo aan geysan khasaaro weyn ku tilmaantey “Weerar fuleynimo”, waxaana ay ka dalabtey dhamaan cidkasta oo haysa sawiro ama wax macluumaad ah in ay la xiriiraan Booliska.
Donald Trump ayaa markii weerarku dhacay fariimo ku boobsiiyey bartiisa Twitterka, waxaana uu ku tilmaamey qofkii fuliyey mid khasaarey oo nolosha ka dhacay oo argagxiso ah, waxaana uu daba dhigey in ay Boolisku garanayaan. Fariin kale ayuu ku shegey Trump in Internetka laga xiro kuwaas, si loo yareeyo weerar argagxiso, maadaama Internetku uu yahay hubka ay wax ku abaabulaan.
Kadib shir saxaafadeedkii Theresa May waxaa telefishanka Sky News sheegay in la aqoonsadey qofka tareenka saarey Boorsada qaraxdey, inkasta oo aan magiciisa la shaacin laakiin baadigoob lagu hayo.